သူတို့ရဲ့ quaint သောတောင်ပေါ်ကျေးရွာများနှင့်အတူ, သဘာဝအလျောက်စိတ်ကိုဖမ်းစား ဆွဲဆောင်မှု, နှင့်ညားမြို့ဗိသုကာ, သငျသညျအံ့သြဖွယ်ရလိမ့်မယ် ဥရောပခရီးစဉ်. Trains in Austria are among ဥရောပသားအပေါင်းတို့အတွက်အများဆုံးအဆင့်မြင့်, ညဥ့်ရထားထိပ်တန်းပုံသဏ္ဍာန်၌ရှိကြ၏ (စကားမစပ်, ညဥ့်ရထားအားလုံးအတူတူပင်လမ်းကြောင်းရှိ တစ်နေ့ရထားလုပ်ပေးအဖြစ်), အများဆုံးအဆင့်မြင့်ကြိုတင်မှာယူမှုများလိုအပ်နှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်အဆင်ပြေနေကြသည်ပါဘူး!
အဆိုပါရန်သင့်လမ်းတွင် ဘူတာရုံ, အလယ်ဗဟို၏လမ်းများလမ်းလျှောက်, ကြိုးစားကြည့်ပါ အကောင်းဆုံးကိုရေခဲ-လိမ်းဆေး၏တဦးတည်း အစဉ်! “ရေခဲပြင် Geissler” Sporgasse အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောအရသာအတွက်လာအော်ဂဲနစ်ရေခဲမုန့်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စူပါအရသာဖြစ်ပါသည်! ရထားလမ်းခရီးစဉ်အားဖြင့်သင့်သြစတြီးယားနဲ့အီတလီဟာမိနစ်အားဖြင့်ဖွင့်ရှာဖွေနေသည်, မ?
သင့်ရဲ့သြစတြီးယားနဲ့အီတလီတွင်ရထားလမ်းခရီးစဉ်အားဖြင့်, သငျသညျဖွယ်ရှိဖြစ်လိမ့်မယ် Florence မှာရပ်တန့်. သမိုင်းနှင့်အတူထုပ်ပိုးဤမြို့၌တစ်ဦးကတစ်ရက်သို့မဟုတ်နှစ်ခု, အနုပညာ, နှင့်ဘာသာရေးအရေးပါမှုစင်ကြယ်သောမှော်ဖြစ်ပါတယ်. ကြည့်ဖို့ပထမဦးဆုံးအမှုအရာစန်တာမာရီယာ Novella ၏ Basilica နှင့် Cloisters များမှာ. သူတို့ကဘုန်းကြီးရထားဘူတာရုံအနီးမှာရှိပါတယ်! အဆင်းလှသော Piazza လက်တွေ့ကျကျအမြဲလူတွေနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုလည်းရှိပါတယ်. ထိုအခါ, အံ့ဖှယျစန်တာမာရီယာ del Fiore နှင့်၎င်း၏ကြီးမားသောအမိုးခုံးပေါ်ကိုရွှေ့. အဖြစ်ကောင်းစွာစန်တာ Croce နှင့် Basilica di စန်း Lorenzo နှင့် Medici Chapel ၏ Basilica ထုတ်စစ်ဆေး.
ခဏနားပါ ရထားခရီးစဉ်အားဖြင့်သြစတြီးယားနှင့်အီတလီမှ အဆိုပါစန်း Lorenzo Market ကမှဦးခေါင်း တစ်ဦးအမြန်အဘို့နှင့် အရသာမုန့်ညက်! ဤသည်စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ် ဒေသခံတွေ '' အကြိုက်ဆုံးနေရာအရပ် စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ရေစာမှ! ဒါကြောင့်, သင်သည်သင်၏နေ့လယ်စာခံစားချင်ပါတယ်ပြီးနောက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးအမှတ်တရပစ္စည်းဝယ်ဖို့? ဟုတ်ကဲ့! အဆိုပါ Uffizi သွားရောက်ခြင်းမရှိဘဲ Florence စွန့်ခွာမနေပါနဲ့, အဆိုပါ Accademia, အဆိုပါ Palazzo Vecchio, နှင့် Pitti နန်းတော်. ဤများမှာ အဓိကပြတိုက် မြို့ထဲမှာ. လည်း, အဆိုပါကပ်လျက် Boboli ဥယျာဉ်မှသွားရောက်ပေးဆောင်, အလှဆုံးဥယျာဉ်များ မင်းမြင်လိမ့်မယ်.
သင်သည်သင်၏ site ပေါ်တွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcities-austria-italy-rail%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)